mayen à Jean, Val d'Hérens, Valais, Sion, Switzerland
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguOlivier
Eli thafa lidala, liza kudilizwa, lakhiwa ngokutsha laza lakhiwa ngokutsha kusetyenziswa iindlela zakwantu. Uyilo lwangaphakathi luyilwe ngokutsha ukuze lubonelele ngepropathi esemgangathweni kwindawo eyodwa.
ILe mayen à Jean iyilwe njengendawo enokubamba
ukuya kuthi ga kwisithandathu sabantu apho wonke umntu anokufumana indawo yakhe ngokweyakhe
iminqweno kunye neemfuno zakho. Oku kulungiswa kwakhona kwasivumela ukuba sibonise umahluko phakathi kobunikazi bexesha elidlulileyo, esilifumanayo kunye nobukho bamaplanga angaphandle, kunye nomoya wangoku kwiingubo zangaphakathi. Kwindawo yokuhlala, ukuvuleka okuvulekileyo kukhokelela kwithafa elijonge iVal d'Hérens.
I-plinth ibandakanya igumbi lokulala elikhulu elifikelela kwithafa eligqunyiweyo elijonge intlambo. Igumbi lokuhlambela lilayishiwe
kwintanda yomhlaba ukunika ukukhanya okusasazekileyo imini yonke.
Ibhari endala ibandakanya indawo yokuhlala ephambili ebandakanya
ikhitshi elifakelweyo, itafile yokutyela kunye nendawo yokuphumla. Kwindawo yokuhlala kukho i-mezzanine enokuthi isetyenziswe njengendawo yokulala okanye njengendawo yokulala kabini njengoko kufuneka.
Le mayen ibonelela ngamathuba amaninzi kwisimo esiya kukwazi,
Umbuki zindwendwe ngu- Olivier
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Evolène